Home Somali News KSA: Boqor Salmaanka Sucuudiga oo magacaabey dhaxal suge cusub
Boqorka dalka Sucuudiga Boqor Salman Bin Cabdulcaziz ayaa walaalkiisa ka yar ka qaadey xilkii dhaxal sugaha, waxaana uu xilkaas u magacaabey wiil uu adeer u yahay oo lagu magacaabo Amiir Maxamed bin Nayef bin Cabdulcaziz.
Wareegtada isku shaandheynta ah ayaa laga sheegey Telefishanka qaranka ee dalkaas subaxnimadii hore ee maanta oo arbaca ah.
Boqor Salmaan ayaa xeeriyey in uu xilkaas ka qaado dhaxal sugihii hore ee ay walaalaha ahaayeen Amiir Muqrin, waxaana la sheegey in uu sidaas codsadey Muqrin bin cabbdul caziz. Dhaxal sugihii la xeeriyey in xilka laga qaado Amiir Muqrim ayaa hooyadiis tahay Yamaniyad.
Amiir Maxamed bin Nayef oo 55 jir waxaa Awoowe u ah asaasihii Boqortooyada Sucuudiga, waxaana sidoo kale loo magacaabey in uu noqdo Wasiirka Arrimaha Gudaha. Dhaxal sugaha cusub Maxamed bin Nayef ayaa wax ku bartey dalka Maraykanka. Amiir Mohammed Bin Nayef ayaa ah Hogaanka guud ee ciidamada La dagaalanka Argagaxisada ee Boqortooyada Sucuudiga, waxaana lagu tilmaamaa xubnaha ugu sar sareeya ee dhanka Amniga ee dalka Sucuudiga. Sanadkii 2009 ayuu ku dhaawacmey weerar ismiidaamin ah, waxaana si weyn loogu xantaa in uu yahay shakhsi aad ugu dhaw dalka Maraykanka.
Aabaha dhalay Dhaxal-sugaha cusub Nayef bin Cabdulcaziz ayaa geeriyoodey sanadkii 2012 waxaana uu horey u ahaan jirey dhaxal-sugihii Boqorkii dhawaan geeriyoodey ee Boqor Cabdalla bin Cabdilcaziz.
Boqorka Sucuudiga ayaa sidoo kale u magacaabey wiilka uu dhalay ee Amiir Maxammed bin Salman in uu noqdo ku-xigeenka dhaxal-sugaha Boqortooyada. Horey ayuu wiilkisa ugu magacaabey Wasiirka Gaashaandhigga, waana qofkii ugu da’da yaraa ee xilkaas soo mara isaga oo ah 34 jir.
Isbedelkan cusub ee uu sameeyey Boqor Salmaan ayaa ka dhigan in Boqortooyada Sucuudigu gashey weji cusub iyo jiil cusub, waxaa tan iyo markii uu geeriyoodey asaasihii Boqortooyada Sucuudiga Boqor Cabdulcaziz bin Ala Sucuud iska dhaxlaayey Boqortooyada wiilashii uu dhaley, waxaana hadda ay u gudubtey kuwii uu Awoowaha u ahaa.
Boqorka dalka Sucuudiga Boqor Salmaan bin Cabdulcasiis, ayaa xilka la wareegay isaga oo la sheegayo in caafimaadkiisu aanu wanaagsneyn, waxaana kamid ah cudurarada uu la tacaalayo Xusuus darro (Dementia), isaga cimriguusu madaxa la galay 80 sano.
Somaliland: Xildhibaan Jirde Oo Ka Dayriyey Nidaamka Dalku Ku Socdo, Shuruucda Lagu Tuntay, Musuqmaasuqa Xukuumadda Kulmiye Iyo Goobaha Waddani Looga Fadhiyo In Uu Is Badal Ku Sameeyo